ဝေ(စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်): နှောင်ကြိုးငင် ပိုးဖလံ
တောင်တစ်တောင်ကိုတော့ ကျော်ပြီးခဲ့ပြီ။ ဝေဟင်က ပျံသန်းပြီး ကျော်ခဲ့တာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ တောင်ခါးပန်းက ပတ်ဖောက်ထားတဲ့ကားလမ်းလေးကနေ ကွေ့ပတ်ပြီး စီးတော်ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့
ဖြတ်ကျော် လာခဲ့တာ။ ချိုင့်ကလေးတွေ၊ အနိမ့်အမြင့်လေးတွေ၊ ကျောက်စရစ်ခဲတွေနဲ့...။
ပတ်ဝန်းကျင်အသွားအလာကလည်း ကျဲပါးလွန်းတာမို့ လကမ္ဘာပေါ် ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း အိပ်မက်ခရီးနှင်နေသလိုတောင် ထင်ချင်လာမိတယ်။
အိပ်မက်ဆိုတာကတော့ အပြင်မှာ ကိုယ်စွဲလန်းလွန်းတဲ့အရာတွေကို တစ်ခါတလေ စိတ်အလိုလိုက်ပြီး ဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်ကြည့်တာမျိုး မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် ဆောင်းတွင်းအိပ်မက် ကျတော့လည်း ကိုယ် မလိုလားတာတွေ၊ ကိုယ်မထင်မှတ်တာတွေ၊ ကြောက်လန့်စရာတွေကို ကယောက်ကယက်နဲ့ အဆီအငေါ်မတည့် တွေ့ရတာမျိုးလေ။
အခု ကျွန်တော့်အဖြစ်ကတော့ နွေလယ်ခေါင် ခြောက်အိပ်မက် မက်နေရသလိုပါပဲဗျာ။ လူတစ်ကို်ယ်နဲ့ ဘ၀နှစ်ခု တစ်ပြိုင်တည်း ရှင်သန်လှုပ်ရှားနေရတယ်။ တစ်ခုက နတ်ပြည်ဆို...၊ တစ်ခုက ငရဲပဲ။
တစ်ခုက မီးဆို...တစ်ခုကရေပဲ။ တစ်ခုက အပူဆို... တစ်ခုက အအေးပဲ။
ဒါဆို အခုသွားရာလမ်းဟာ အအေးကနေ အပူဆီကိုကူးရာ နယ်ခြား။ နတ်ပြည်ကနေ ငရဲကို သွားရာလမ်းကြောင်း။ ငြိမ်းချမ်းအေးမြမှုကနေ ပူပြင်းလောင်မြိုက်မှုတွေဆီ ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့မိတာ။
ပိုးဖလံကောင်ေးလတွေလိုပေါ့။ မီးမှန်းသိပေမယ့် တိုးဝင်ချင်တယ်။ ပူမယ်မှန်း သိပေမယ့် လောင်ကျွမ်းချင်တယ်။ ကျွန်တော်ဆိုတဲ့လူသားကတော့ ငွေရမယ်မှန်းသိနေတာမို့ ဒီလမ်းကို တောင်တွေကျော်ပြီး ဖြတ်ရဦးမယ်လေ။
“ မီး ကားမလိုချင်တော့ပါဘူး ဖေကြီးရယ်။ ပြန်မသွားပါနဲ့တော့နော်။ မီးတို့မှာ ဆိုင်ကယ်လေး ရှိသားပဲလေ နော”
ငိုမဲ့မဲ့သမီးအသံလေးက ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ တငွေ့ငွေ့လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ ဝေဒနာမီးကိုလေပင့်ပေးလိုက် သလိုပဲ။ ချုံးပွဲချပြီးသာ ငိုလိုက်ချင်တော့တယ်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်၊ အိမ်ထောင်တစ်ခုရဲ့ ဦးစီးဦးဆောင်တစ်ယောက် ဆိုတဲ့ တာဝန်အသိကသာ ထိန်းချုပ်မထားခဲ့ရင်... ကျွန်တော် ဒီနေရာကနေ လှည့်ပြန်ချင်နေပြီ။ ကျွန်တော် ဒီအခြေအနေကနေ ရုန်းထွက်ချင်နေပြီ။. ကျွန်တော် ရှေ့တန်းကနေ တပ်ဆုတ်ချင်နေပြီ။
တစ်ခါမှ ခရီးဝေးမခွဲဖူးသေးတဲ့ ငါးနှစ်အရွယ် သမီးလေးက ဖအေကို လွမ်းလှပြီတဲ့လေ။
ထူးထူးဆန်းဆန်း “ ကားစီးချင်တယ်။ ၀ယ်ပေးပါ..” လို့ မပူဆာစဖူး ပူဆာလိုက်တဲ့ သမီးလေးရဲ့စကားကြားရပြီး မကြာခင်မှာပဲ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ငွေတော်တော် ရနိုင်မယ့် အလုပ်တစ်ခုက ပေါ်လာတယ်။
ဘ၀မှာ အခွင့်အရေးတစ်ခုဟာ နှစ်ခါမလာဘူးတဲ့။ အခွင့်အရေးရတုန်း အမိအရဆုပ်ကိုင်နိုင်မှသာ
အောင်မြင်မှုကို လက်လှမ်းနိုင်မယ်။ အခွင့်အရေးကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခံလိုက်ရင် အောင်မြင်မှုဆီ ဘယ်လှေကားနဲ့တက်မလဲ။
ခက်တာက ကျွန်တော်နင်းတက်ရမယ့် လှေကားထစ်တွေက ကျွန်တော့်ရဲ့ယုံကြည်မှု၊ ခံယူချက်၊ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေဆိုတာ ခပ်စောစောက ကျွန်တော်မသိခဲ့တာဘဲ။
အတွေ့အကြုံမရှိခဲ့တာလေ။ ကျွန်တော့်ဝါသနာ၊ ဗီဇ၊ ကျွန်တော့်ရဲ့အသွေးအသားထဲ ကိန်းအောင်းနေတာက အနုပညာချင်ခြင်းတွေပဲ။ ကျွန်တော် စီးပွားကောင်းကောင်း မရှာတတ်ဘူး။ သံစဉ်စားသားတွေပဲ ရှာဖွေနေချင်တယ်။ ကျွန်တော် ငွေကြေးဂုဏ်ဓနတွေ မမက်မောဘူး။ ဂီတ၊ ကဗျာကိုပဲ ဖက်တွယ်ထားချင်တယ်။ ကျွန်တော် ရာထူးစည်းစိမ်တွေ မမြင်တတ်ဘူး။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပဲ တန်ဖိုးထားချင်တယ်။
ကျွန်တော် ကံကောင်းပါတယ်။ ဂုဏ် ပကာသန၊ စည်းစိမ်တွေ ဝေဆာအုံ့ဆိုင်းနေတဲ့ ပင်ယံထက်က ပန်းကလေးတစ်ပွင့် ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲ ကြွေကျသက်ဆင်းလာခဲ့တယ်။ အဲဒီပန်းကလေးက အနုပညာရနံ့တွေလည်း သင်းမွှေး၊ နားလည်မှုတွေလည်း ကြိုင်လှိုင်နေခဲ့သေးတယ်လေ။
နှစ်ကိုယ်တူဘ၀ခရီးအစက ကျွန်တော့်တစ်သက်မှာ အပျော်ရွှင်ခဲ့ဆုံးအချိန်တွေပါ။ မောင်နှံတူစုံတွဲပြီး သံစဉ်တွေကြားမှာ ၀ဲပျံနေလိုက်ကြတာ။ ပန်းပေါင်းစုံကလည်း ထုံသင်း။ သက်တံ့ရောင်စုံကလည်း ဖန့်ဝင်းလို့ပေါ့။
ကျွန်တော် ဦးဆောင်ကြိုးစားထားတဲ့ တီးဝိုင်းလေးပေါ်ကို စိတ်တူဝါသနာတူ ချစ်သူကို လက်တွဲ
ခေါ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့ သီချင်းတွေ ရေးကြဆိုကြရင်း၊ နယ်မြို့လေးက စတိတ်ရှိုးတိုင်းမှာ ပွဲတိုင်းကျော်ကြရင်း..၊ တီးဝိုင်းကရသမျှ အနုပညာကြေးတွေကို တစ်ဖွဲ့လုံး စိတ်တူသဘောတူ ဘယ်သူမှ ခွဲဝေမယူကြဘဲ စေတီငယ်လေးတွေမှာ ထုံးသင်္ကန်းကပ်လှူကြတယ်။ တောရကျောင်းလေးတွေမှာ အလှူသွားလုပ်ကြတယ်။
ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှ မရတဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ပျော်ရွှင်တက်ကြွစွာလုပ်ရင်း စားဝတ်နေရေးအတွက် ငွေအနည်းအကျဉ်းရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကိုလည်း ၀တ်ကျေတမ်းကျေ လုပ်နေဖြစ်ခဲ့တယ်။ ယောက္ခမတွေ ပြန်မခေါ်မချင်းဘဲ ဆိုပါတော့။
ငွေကြေး ပညာ ဂုဏ်ပကာသန ဘာတစ်ခုမှ မရှိဘဲ အနုပညာပိုးတွေသာ တရွရွထိုးနေတဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ သဘောမတူတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းကလည်း ကြာကြာတော့ စိတ်မဆိုးနိုင်အားပါဘူး။ သမီးလေးးတစ်ယောက်တည်း ရှိတာ ဆိုတော့လေ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ သူတို့ပြန်မခေါ်ခင်က နှစ်ယောက်တည်း ပျော်ရွှင်စွာ ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ကို ပိုမက်မောတယ်ဗျာ။
ဂုဏ်ဓနအသိုင်းအ၀ိုင်းထဲကို ၀င်ရပြီဆိုကတည်းက ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အနုပညာပိုးတွေဟာ ပိုးသတ်ဆေးအမျိုးမျိုးနဲ့ တိုးတော့တာပေါ့။ ဘယ်ရှောင်နိုင်လိမ့်မလဲ။
အသိအမှတ်ပြုလိုက်တဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲ ၀င်ခွင့်နဲ့ ထူထောင်ပေးတဲ့ စီးပွားတစ်ခု အတွက် ကျေးဇူးတရားတွေ က နာမည်ရစပြုနေတဲ့ ကျွန်တော့်တီးဝိုင်းလေးကို တဖြည်းဖြည်း သွေးအေးစေ ခဲ့ပြီလေ။ လူမှုဘ၀ ရပ်တည်ရေးအတွက် လောဘအပူမီးတွေဟာ တစ်ဖက်က အနုပညာစီးဆင်းမှု ကို အေးခဲစေခဲ့ပြီ။
ကြင်သူကို တင်ဆောင်ရင်း တအိအိနင်းခဲ့ရတဲ့ စက်ဘီးလေးကနေ လိုရာခရီးချုံ့ အမြန်ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မယ့် ဆိုင်ကယ်လေးအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အခါမှာ...၊ ယောက္ခမတွေ ၀ယ်ပေးထားတဲ့ ပျဉ်ထောင်အိမ်လေးကနေ သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ တိုက်အိမ်လေးအဖြစ်ကို တိုးတက်စေတဲ့အခါမှာ..၊ နှစ်ကိုယ်တူဘ၀လေးကနေ ဆည်းလည်းလေးတွေ အိမ်မှာ ချိတ်ဆွဲလာချင်တော့ တဲ့အခါမှာ...၊ ပိုးသတ်ဆေးတွေဟာ တဖြည်းဖြည်း အဆင်မြင့်် ပြင်းထန်လွန်းလာတာမို့ ကျွန်တော်ပျိုးထောင်ခဲ့တဲ့ တီးဝိုင်းလေးကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲ ကျောခိုင်း လိုက်ရတော့တယ်။ ကျွန်တော်မရှိရင် ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းလည်း တစ်ယောက်မှ မရှိကြတာမို့ တစ်စစီ ပြိုကွဲသွားတဲ့ အနုပညာဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုဟာ သင်္ခါရရဲ့ ပြယုဂ်တစ်ခုပါပဲလေ။
အဲဒီအချိန်မှာ ၀မ်းနည်းကြေကွဲမှုကို အာရုံစူးစိုက်မခံစားအားသေးတဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ရုန်းကန်နေရပြန်သေးတော့ တရွရွထိုးခဲ့တဲ့ပိုးတွေ တစ်ကောင်မကျန်
ဂစ်တာအိုလေးလည်း ကြိုးပြတ်ဖုန်တက်ပြီး စတိုခန်းထဲက ချောင်တစ်ချောင်မှာ...။ ကျွန်တော်လည်း တစ်နေကုန် အလျဉ်မပြတ် အော်ဟစ်ဆူညံနေတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်ရဲ့
ငွေသိမ်းကောင်တာခုံပေါ်မှာ...။ လက်တွဲဖော်ကလည်း သားသမီးနှစ်ယောက်နဲ့ ကျောင်းပို့ကျောင်းကြို ကျူရှင်စုံတွေကြားမှာ...။
မိသာစု လိုအပ်ချက် ငွေကြေးကို အလျင်စလိုရှာဖွေနေမိတဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကျတော့ ရှာဖွေမတွေ့တော့ဘဲ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ရတယ်။ ဖြစ်ချင်တဲ့ဘ၀နဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ဘ၀ နှစ်ခုကြားက တကယ်တမ်း နယ်နိမိတ် အနားသတ်ဟာ အစိမ်းရောင်ငွေစက္ကူလေးတွေပါလားလို့ ရင်နင့်နာကြည်းမိတော့တယ်။
ဆောက်လက်စအိမ်လေး တစ်ဝက်တစ်ပျက်မှာ ကျွန်တော့်လက်ထဲ ပိုက်ဆံပြတ်သွားတယ်။ အမှန်က မှန်းထားတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ထက် နှစ်ဆရှိမှ အိမ်ဆောက်သင့်တယ်ဆိုတာကို အချိန်လွန်မှ သိရတာလေ။
နှစ်ဖက်မိဘကိုလည်း ဒုက္ခမပေးချင်တာကြောင့် တိုးလိုးတန်းလန်းဖြစ်နေတဲ့ ဆောက်လက်စအိမ်ကို အပြီးသတ်နိုင်ဖို့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆီက ခဏလှည့်ရတယ်။
အိမ်အပြီးသတ်ပြီးခါမှ ဘဏ်မှာ ပေါင်လို့ရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ပြန်ဆပ်ရတာပေါ့။ ဘဏ်တိုတင် တစ်လတစ်သိန်း
နီးပါး ပေးရတာမို့ ကိုယ့်အိမ်ကိုကိုယ် တစ်လတစ်သိန်းနဲ့ အိမ်လခပေးနေနေရသလိုတောင် လင်မယားနှစ်ယောက်ပြောပြီး ရယ်မောမိသေးတယ်။
စားနိုင်သောက်နိုင် အတိုးပေးနိုင်လောက်တဲ့ ၀င်ငွေရှိပေမယ့် ပေးရတဲ့အတိုးကလည်း မနည်းလှတော့
စုငွေကျန်ဖို့ကြိုးစားရင်း လတိုင်း ကျွန်တော်တို့လင်မယား ရင်မောရတာပါပဲ။ သားနဲ့သမီး ကျောင်းစရိတ်
ကတင် လူတန်းစေ့ မျက်နှာမငယ်စေဖို့ လိုအပ်ချက်ဘယ်လောက်ကြီးတာ မိဘတိုင်းအသိလေ။ အရောင်းအ၀ယ်ကောင်းတဲ့လမှာ စုမိတဲ့ငွေလေး နည်းနည်းပါးပါးဟာ အရောင်းအ၀ယ်ပါးတဲ့လမှာ အသုံးစရိတ်ထဲ ပါသွားပြန်ရော။
ဒီလိုနဲ့ လေးငါးနှစ်လောက်ကြာလာတော့ အတိုးပေးနေရတဲ့ အကြွေးလေးသာမရှိခဲ့ရင် ကားစီးနိုင်နေပြီလို့ တွက်တွက်ပြီး သက်ပြင်းတွေသာ ကျိတ်ကျိတ်ချရတဲ့ အကြိမ်တွေလည်း များခဲ့ပေါ့။
အဖြစ်က လမ်းလျှောက်စက်ပေါ် လမ်းလျှောက်နေမိသူလိုပဲ။ ဘယ်လိုကြိုးစားရုန်းပေမယ့် နေရာမရွေ့ဘဲ
လူကသာ ခြေကုန်လက်ပန်းကျလာတယ်။ ခရီးက ရှေ့ကို မတိုးဘူးဖြစ်နေတယ်။
ဒီအချိန်မှာပဲ ညီမလေးနဲ့ အိမ်ထောင်ကျတဲ့ ယောက်ဖတော်သူရဲ့ ကူညီစောင်မမှုတစ်ခုဟာ ကျွန်တော့်ဘ၀အတွက် လှေကားထစ်လေးတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
လောကကြီးရဲ့ ကံကြမ္မာကျီစားမှုက ရယ်တော့ရယ်ချင်စရာပါ။ မြန်မာစာ အဓိကနဲ့ ဘွဲ့ယူပြီး သီချင်း ကဗျာရေး၊ ဂစ်တာတီးတဲ့ ကျွန်တော်က ကန်ထရိုက်လုပ်ရမတဲ့။ ဆောက်လုပ်ရေး အတွေ့အကြုံဆိုလို့
ကိုယ်ပိုင်တိုက်အိမ်လေးတစ်လုံးပဲ ဦးဆောင်ဆောက်ဖူးတဲ့သူက ရထားလမ်းဖောက်ရာမှာ ရေကျော်ခုံးကျော်တံတားလေးတွေ ကန်ထရိုက်ရခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်နေထိုင်ရာမြို့လေးရဲ့ တစ်ဖက်ကမ်း၊ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးရဲ့ အနောက်ဘက်တောင်လေး တစ်လုံးနှစ်လုံးလောက် ကျော်ပြီးရင်ရောက်ပြီ။ ရထားလမ်းအသစ်ကြီးဖောက်ဖို့ မြေဖို့ထားတဲ့ တာပေါင်ကြီးဘေးက လယ်ကွင်းတွေထဲမှာ ကျွန်တော်နဲ့ပန်းရန်ဆရာရော၊ အကြမ်းသမားရော၊
ဆယ်ယောက်ကျော်တပ်စုကလေး စခန်းချဖို့ရောက်သွားတော့ နွေဦးရာသီ။ ဆောင်းပန်းချီတောင် မပြယ်ချင်တတ်သေးဘူး။ လယ်ကွင်းတွေကတော့ ပပ်ကြားအက်အက်စပြုနေပြီ။
အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူဆိုတော့ စရိတ်စကဖိစီးပြီး အမြတ်မကျန်မှာကိုဘဲ ကျွန်တော် အလွန်အမင်း
ပူပင်နေမိတယ်။ ကန်ထရိုက်စလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ နီးစပ်ရာမိတ်ဆွေတချို့ကလည်း ဘယ်သူကဖြင့် ဘာကန်ထရိုက်ယူလိုက်တာ၊ ဘယ်လောက်ရှုံးသွားတာ၊ ဘယ်လိုထိသွားတာ စသဖြင့် သတိပေး သတင်းလေးတွေကိုလည်း လူသတင်း လူချင်းဆောင်လာကြတာကိုး။
“ ကိုကြီးရေ... စီးပွားရေးသမား လုပ်ငန်းရှင်တွေ မမြတ်ဘူး ညည်းတာ အလကား။ လိုချင်သလောက် အမြတ်မရလို့ပြောတာ။ ရှုံးတယ်ပြောရင် မှန်းသလောက်မကိုက်လို့။ မဆိုးပါဘူးဆိုရင် ထင်တာထက် ပိုပိုက်သွားလို့သာမှတ်။ တွေဝေမနေနဲ့။ ဆက်သာလုပ်..” တဲ့။
နောက်တန်းက ညီမက တွန်းအားကောင်းပေမယ့် အလယ်တန်းက လက်တွဲဖော်က ဆီမထိုးသလို၊ ရှေ့တန်းတက်ရမယ့် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဆီမလိုက်ဘဲ တွန့်ဆုတ်တွေဝေစွာနဲ့ပေါ့။
ကိုယ်ဆောက်ရမယ့်တံတား ဧရိယာကိုကြည့်လိုက်တော့ ကိုယ့်အိမ်ထက်တောင်ကြီးနေသေးတယ်။ အင်ဂျင်နီယာရုံးက ချပေးလိုက်တဲ့ စကေးကို တိုက်တစ်လုံးဆောက်ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံရယ်၊ အများပြည်သူ
ခရီးလမ်း ဖြောင့်ဖြူးစေဖို့ဆိုတဲ့ စေတနာရယ်၊ နောက်တန်းက ညီမလေးပံ့ပိုးပေးလိုက်တဲ့ ရင်းနှီးငွေရယ်၊ အိမ်ဆောက်တုန်းက ပန်းရန်အဖွဲ့ရယ်...၊ လက်တွဲပြီး ရှေ့ဆက်ချီတက်ခဲ့ကြတယ်။
ပန်းရန်အဖွဲ့နဲ့ပဲ အတူတူ မြေစိုက်တာပေါ်လင်တဲလေးထိုးပြီး အတူနေ၊ အတူစား၊ ၀ါးကပ်လေးခင်းပြီး အိပ်ခဲ့ရတာတောင် တစ်လကျော်ခဲ့ပြီ။ နေ့ပူညချမ်း တပေါင်းလထဲမှာ နေ့လယ်ခင်းဆိုရင် ရထားလမ်းနဲ့ နီးစပ်ရာကားလမ်းပေါ်မှာ၊ နေရှိန်ပြင်းပြင်းအောက်မှာ စီးတော်ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ ကျွန်တော်။
လိုအပ်တဲ့ စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ အုတ်၊ သဲ၊ ကျောက်၊ ဘိလပ်မြေကအစ သောက်၊ သုံး၊ ချိုးဖို့ ရေအဆုံး... လိုအပ်ချက်အားလုံး ဆိုက်ထဲရောက်အောင် အချိန်နဲ့အပြိုင် ပြေးလွှားရတယ်။
အချိန်ချုံ့နိုင်မှ စရိတ်သက်သာမှာဆိုတော့ အချိန်နဲ့အမျှ ကျွန်တော့်စွမ်းဆောင်အားကို ပိုမြှင့်ပြီး အသုံးပြုခဲ့ရတာပေါ့။ စိတ်ကူးထဲမှာ၊ ပါးစပ်ဖျားမှာ လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမှန်သမျှဟာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး သိပ်မကောင်းလှတဲ့ ကျွန်တော့်စခန်းမှာ ထင်ထားတာထက် လေးငါးဆ ခက်ခဲပင်ပန်းလှပါတယ်။ အနုပညာသမားဖြစ်ချင်တဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ဘ၀တိုက်ပွဲကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းချီတက်နေရတဲ့အဖြစ်မှာ အံဝင်ခွင်ကျ ဘယ်လိုလုပ်ရှိမလဲဗျာ။
နေ့လယ်ခင်းဆို ပူလွန်းလို့ နေစရာမရှိတဲ့ လယ်ကွင်းပြင်ကြီးထဲမှာ ချွေးတွေမတရားထွက်ပေမယ့်
ခန္ဓာကိုယ်ကို စမ်းကြည့်လိုက်ရင် ချွေးမထွက်ခဲ့ဖူးလို့တောင် ထင်ရလောက်အောင် တိုက်တဲ့လေက
ခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းလွန်းတယ်။ ညကျတော့လည်း သစ်ပင် အကာအကွယ်မရှိပြန်တော့ အကာအရံ
မလုံတဲ့တဲထဲမှာ စောင်ခြုံအိပ်ပေမယ့် အရိုးစိမ့်နေအောင် အေးပြန်ရော။
တစ်တောင်လောက် ဇိမ်ခံမွေ့ရာအထူကြီးနဲ့ အိပ်နေကျတော့မဟုတ်ပေမယ့် ၀ါးကပ်ပေါ်ခင်းထားတဲ့ ဂွမ်းကပ်ပါးပါးလေးက ခိုးလိုးခုလုနဲ့မို့ မိုးလင်းရင် ကိုင်အရိုက်ခံထားရသလို တစ်ကိုယ်လုံးနာကျင် ကိုက်ခဲ
နေတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တောင် နေနိုင်သေးတာ၊ ကျွန်တော်လည်း ယောက်ျားပဲ ဆိုပြီး အားတင်းရတာပေါ့။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စကားအကောင်းပြောရင်တောင် အဆဲလေး အတိုင်းလေးနဲ့မှ ပြောဆိုတတ်
တဲ့လူစုကြားမှာ ဘယ်လိုပဲ တည်တည်ခန့်ခန့်နေပေမယ့် ကာလရှည်လာတော့ ဇာတိကပြလာကြတယ်။
ညရောက်ရင် နီးစပ်ရာရွာထဲ ခဏလည်ရင်း သောက်လာလား သောက်လာရဲ့၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အခန့်မသင့်ရင် ဓားတကိုင်ကိုင်နဲ့ ကြိမ်းမောင်းလား ကြိမ်းကြရဲ့၊ အလုပ်ထဲမှာလည်း ကျွန်တော်မှရပ်ကြည့်မနေရင် နည်းနည်းလေးကွယ်တာနဲ့ ထိုင်နေလားနေကြရဲ့။
ဒီလိုလူစုနဲ့အတူ ငွေများများလည်း ဆောင်မထားရဲတော့ လေးငါးရက်တစ်ခါလောက် အိမ်ပြန်ပြီး
ငွေယူရတယ်လေ။ မိသားစုခင်တဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ အကွက်ပေါ့။ ဒီလိုပြန်ရမှလည်း အလွမ်းပြေတယ်။ အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာပြီးလည်း ပြန်မိတယ်။
ကျွန်တော့်လိုပဲ ပန်းရန်အဖွဲ့ကလည်း အကွက်ချောင်းနေတာ။ ကျွန်တော်ပြန်မယ့် အချိန်ကိုပေါ့။ ဒါကို ကျွန်တော်ကလည်းသိတယ်။
တံတားအောက်ခြေကို ကျောက်လောင်းတာ တစ်ရက်နဲ့ညတစ်ဝက် ကြာသွားတယ်။ ပင်ပန်းနေတဲ့ ပန်းရန်အဖွဲ့ကို တစ်ရက်အနားပေးပြီး ကိုယ်ထည်အုတ်စီတာက ပန်းရန်အဖွဲ့အတွက် ထမင်းစားရေသောက်
ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း ပြန်ဖို့ပြင်တယ်။
စခန်းနဲ့အိမ်က ဆိုင်ကယ်နဲ့ခပ်သွက်သွက်မောင်းသွားရင် သုံးနာရီလောက်ပဲကြာမယ်။ အိမ်မှာ တစ်ရက်နားပြီး ပြန်လာရင် စခန်းမှာ ကျွန်တော်မရှိမယ့်ရက်က နှစ်ရက်။ တစ်ရက် အုတ်စီတာ ဘယ်နှစ်လွှားပြီးတယ်၊ ဘိလပ်မြေအိတ် ဘယ်လောက်ကုန်တယ် ဆိုတာကို အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ပန်းရန်ဆရာနဲ့ စံချိန်ယူထားလိုက်တယ်။ ဘိလပ်မြေအိတ်တွေ ထိန်းသိမ်းဖို့လည်း ကျွန်တော့်တပည့် လူယုံကောင်လေးတစ်ယောက်ကို ချန်ထားခဲ့တယ်။ ဂရုစိုက်ကြည်ဖို့လည်း မှာထားရတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ စခန်းမှာ တန်ဖိုးအရှိဆုံးက ဘိလပ်မြေပဲ။ ပန်းရန်အဖွဲ့တွေ မျက်စောင်းထိုးနေတာလည်း ဒီဘိလပ်မြေပဲ။
ကျွန်တော်က အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ ကန်ထရိုက်တာဆိုပေမယ့် ဒီလောက်တော့လည်း မအသေးပါဘူး။ အိတ်အရေအတွက်ကို သေချာရေ။ တပည့်ကိုလည်း သူတို့ လာညှိရင်တောင် မပါဖို့သေချာစည်းရုံး။ ကိုယ့်ဘက်က လုံခြုံအောင်လုပ်ပြီးမှ မြှုံးလွတ်ငါးလို အငမ်းမရပြန်ခဲ့တော့တယ်။
ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ ကျွန်တော်ဟာ နှောင်ကြိုးမိနေသူပါပဲ။ မိတာမှ ကျွန်တော့်
ခြေနှစ်ချောင်းမှာ တစ်ချောင်းကိုတစ်ကြိုးစီ ချည်မိနေတာ။ ရှေ့ကို ဇောနဲ့ လှမ်းလိုက်တဲ့ ခြေလှမ်းရဲ့
နောက်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ခြေကို နှုတ်သိမ်းဖို့ကျတော့လည်း တုံ့နှေးနေပြန်တယ်။
မိသားစုကို တွေ့ချင်စိတ်နဲ့ အလုပ်ကို စိတ်မချစိတ်ဟာ နှောင်ကြိုးနှစ်ခုလို အားပြိုင်ဆွဲခံနေရတော့ ကျွန်တော် တော်တော်တုန်လှုပ်သွားတယ်။
သီချင်းလိပ်ပြာလေးတွေ လယ်ပပ်ကြားအက်ထဲမှာ ညှိုးရော်ခြောက်သွေ့နေတာတောင် ကျွန်တော် မမြင်တော့ဘူးလေ။
“ မေ ငွေမမက်လို့မှ ကို့နောက်လိုက်ခဲ့တာပါ။ ငွေလိုချင်မှဖြင့် ငွေပေါတဲ့သူကို ရွေးမှာပေါ့။
မေက ငွေထက် အချစ်ကို တန်ဖိုးထားခဲ့ပေမယ့် မေ တန်ဖိုးထားခဲ့တဲ့ ချစ်သူက ခုတော့ ငွေကိုပိုမက်သွားပြီ။
“ ရပ်လိုက်ပါတော့။ ဒီဇာတ်လမ်းကို ဒီမှာတင် ရပ်လိုက်ပါတော့။ ခုချိန်နောက်ဆုတ်ရင် မီသေးတယ်။ အလွန်ဆုံး ရှုံးရင် ဂဏန်းခြောက်လုံးပေါ့။ ဒီလောက်တော့ ကျွန်မတို့ခံနိုင်ပါသေးတယ်။
“ ကိုက ဘယ်သူ့ကို ကြောက်နေတာလဲ။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ထည့်စဉ်းစားမနေစမ်းပါနဲ့။ ပျော့ညံ့တယ်လို့ အပြစ်ပြောမယ့်သူတွေ၊ ဇွဲမရှိဘူးလို့ ကဲ့ရဲ့မယ့်သူတွေ၊ ဒါလေးများလို့ နှာခေါင်းရှုံ့မယ့်သူတွေ။ တကယ်က
ငါလုပ်နိုင်တယ်လို့ပြချင်လို့ ကိုတောင့်ခံနေတာ မေသိသားပဲ။ ကိုဟာ သက်သက်မဲ့ ဒုက္ခခံပြီး လောဘ
ကြီးနေတာ။ လူအထင်ကြီးစေချင်တဲ့ အတ္တတစ်မျိုးဝင်နေတာ။
“ ဒီငွေတွေကို ကျွန်မအတွက် ရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ ခုချက်ချင်းရပ်လိုက်ပါ။ ကျွန်မ ဘာမှမလိုချင်ဘူး”
ကျွန်တော့် ပါရမီဖြည့်ဖက်ဟာ တော်လေး၀၀င်မဟုတ်သလို ကျွန်တော်ကလည်း ဘုရားအလောင်း မဟုတ်လေတော့ နားလည်မှုတွေ အမြဲနေရာတကျ မရှိနိုင်ပါဘူး။ မေ့ရင်ထဲက ဝေဒနာနဲ့ ကျွန်တော့်
စိတ်ရင်းစေတနာကြားမှာ နားလည်မှုတစ်ခုခု အံချော်လမ်းလွဲနေခဲ့တာ ရင်အနာခဲ့ရဆုံးပါ။
“ ကို့အတွက်ဆိုလည်း ဒီအလုပ်ကို မလုပ်ဘူး။ မေ့အတွက်လည်း လုပ်စရာမလိုမှန်းသိတယ်။ ခုလက်ရှိဘ၀က ကိုတို့နှစ်ယောက်တည်းမှ မဟုတ်တာဘဲမေရယ်။ ကို့သားနဲ့သမီးအတွက် ငွေများများ
ရမယ့် ဒီအလုပ်ကို ကိုလုပ်သင့်တယ်လို့ အားတင်းပြီး လုပ်ရတာပါ။ ကို့အတ္တအတွက်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။
ကိုတို့နှစ်ယောက်တည်းသာဆို ပိုက်ဆံမချမ်းသာရင်နေ ကို့ဝါသနာ ဂီတနဲ့ကဗျာကိုပဲ ကို ဖက်တွယ်ထား
မှာပါ၊ ဇွတ်တရွတ် မိုက်ရူးရဲမဆန်ချင်စမ်းပါနဲ့ကွယ်။ ဘဏ်မှာ တိုက်ပေါင်ထားတဲ့အကြွေးတွေ ကြေချင်လို့မှ
ဒီအလုပ်ကို စခဲ့မိပြီ။ လုပ်ငန်းအရင်းအနှီးအတွက် ချေးထားရတဲ့ငွေပါ ထပ်အကြွေးတင်ရင် အတိုးဆပ်ရင်းနဲ့ပဲ ကြွေးရင်းဆပ်နိုင်တဲ့ဘ၀ ပိုဝေးသွားမှာပေါ့။ ကလေးတွေကို အကြွေးအမွေပေးတဲ့ မိဘတော့ မဖြစ်ပါရစေနဲ့ မေရယ်....”
တကယ်တော့ နားလည်မှုခေါင်းပါးလွန်းလို့ ပေါက်ကွဲနေရတာမှ မဟုတ်ဘဲ။
ကျွန်တော်ပင်ပန်းတာကို မကြည့်ရက်တာရော၊ တစ်ခါမှမခွဲခွာဖူးလို့ ဝေးကွာနေရတဲ့ခံစားချက်တွေ ပြင်းထန်တာရောကြာင့် မေ စိတ်လှုပ်ရှားနေတာမှန်း ကျွန်တော်ကတော့ နားလည်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကရော ရင်မနာတတ်ဖူးတဲ့လား။ ဇနီးနဲ့သားသမီးကို ခင်တွယ်တတ်လွန်းလို့တောင် ဟိုး အရင်ကတည်းက ဘယ်လောက်ပဲ ငွေကြေးအခက်အခဲကြုံကြုံ၊ မိတ်ဆွေအသိထဲက နိုင်ငံခြား အလုပ်ထွက်လုပ်တဲ့ သတင်းတွေ ဘယ်လောက်ကြားကြား...
“ မေ ကို့ကို နိုင်ငံခြားလွှတ်ပြီး အလုပ်လုပ်ခိုင်းဖို့တော့ ဘယ်တော့မှ မပြောပါနဲ့နော်။ ကို မေနဲ့ ကလေးတွေကို မခွဲနိုင်ဘူး။ မြန်မာပြည်ထဲမှာပဲ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းပါစေ၊ လုပ်ပါ့မယ်...”
“ အို အဲဒါတော့ စိတ်သာချ။ ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တောင် မေက မလွှတ်သေးဘူး...”
အဲဒီလို ကျွန်တော်တို့မောင်နှံက ရှေ့သွားနောက်လိုက် ညီခဲ့ကြတာပါ။
အလုပ်စခန်းကိုပြန်တဲ့ တောင်ပတ်လမ်းလေးက ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ခရီးလမ်းလိုပဲ။ ခပ်ဆင်ဆင်တူတယ်။
ဝေဟင်က လေယာဉ်နဲ့သာကျော်ရမယ်ဆိုရင် ဒီခရီးက အနီးလေးပဲပေါ့။ ချိုင့်ဗလပွ တောင်ပတ်လမ်းကနေ
ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ဆိုတော့ ခရီးက မနီးချင်ဘူး။
ဒီကြားထဲ အိမ်ပြန်ခရီးမဟုတ်ဘဲ အလုပ်ပြန်ခရီးဆိုတော့ ပိုဝေးတော့တယ်လေ။
သားနဲ့သမီးရဲ့ မျက်ရည်လဲ့နေတဲ့ မျက်ဝန်းလေးတွေနဲ့ အဖေလုပ်သူကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖက်ထားတဲ့ လက်လေးတွေက ခုထိ ကျွန်တော့်နှလုံးသားကို ဆုပ်ဆွဲထားသလိုပဲ။
ဘယ်လောက်ပဲ နှောင်ကြိုးတွေက ခြေတုံ့ဆွဲထားပေမယ့် အိမ်ထောင်ဦးစီး ယောကျာ်းသား
တစ်ယောက်ရဲ့တာဝန်ဆိုတဲ့ အသိကလည်း အလုပ်စခန်းရှိရာကို တွန်းပို့နေတယ်။
နောက်ထပ် တံတားတွေ ကန်ထရိုက်ထပ်ရဖို့ အခွင့်အရေးနဲ့ မိသားစု စီးပွားရေးပြေလည် တိုးတက်ဖို့လမ်းတွေ ရှေ့မှာ ပွင့်နေတာ အားရစရာ မြင်နေရပြီလေ။ အစားအသောက်အနေအထိုင် ပင်ပန်းဆင်းရဲတာကတော့ ကျွန်တော် ယောက်ျားပဲ ခံနိုင်ရမှာပေါ့။
အလုပ်သမားထိန်းချုပ်ရေး၊ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးစုံ ရရှိရေး စတဲ့ အခက်အခဲမျိုးစုံကလည်း ကျွန်တော် ယောက်ျားပဲ၊ စွမ်းဆောင်နိုင်ရမှာပေါ့။
ဒါပေမယ့် မိသားစုကို လွမ်းတဲ့စိတ်ကတော့ ဘယ်တော့မှ နေသားကျသွားမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကလည်း တောင်လေးတစ်လုံး နှစ်လုံးလောက်ကျော်ပြီး ဧရာဝတီမြစ်ကူးတံတားပေါ်ကို ဖြတ်လိုက်ရင်
ရောက်နိုင်တာပဲ။ ဒီလိုပဲ ဖြေတွေးရမှာပေါ့။
အင်း...တံတားလေး နှစ်စင်း သုံးစင်းလောက်တော့ အားတင်းပြီး ကြိုးစားလုပ်လိုက်ပါ့မယ်လေ။
ပြီးခဲ့ရင်တော့ ပိုးသတ်ဆေးအပြင်းစားတွေ မိထားတဲ့ ကျွန်တော်ဝါသနာလေးတွေကို ဆေးပြန်ကုရဦးမယ်။
မိသားစုအတွက် တင်နေတဲ့ အကြွေးလေးကြေပြီးရင် ကျန်တဲ့ငွေလေးနဲ့ ကျွန်တော့်သီချင်းတွေ ဒီမိုခွေလေး
ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ တီးလုံးခွေလေးက ဘယ်မှာ သိမ်းထားမိတာပါလိမ့်။
ကျွန်တော့်ရေးလက်စ ကဗျာလေးရော။ ဘယ်စာအုပ်ကြားမှာ ညှပ်ထားတာပါလိမ့်။
အမှန်တော့.... ကျွန်တော့်ဝိညာဉ်က သီချင်းတွေ ကဗျာတွေမှာပဲ ပူးကပ်နေတာပါဗျာ။ ကျွန်တော့်လက်တွေက ဂစ်တာနဲ့ ကလောင်ကိုင်ပြီး သီချင်းကဗျာတွေပဲ ဖန်တီးသင့်တာပါ။ ဘာဆိုင်လဲ။
ကဗျာဆရာ၊ သီချင်းရေးဆရာ မင်းဇံကျော်ပဲ ဖြစ်ချင်တာ။ ကန်ထရိုက်တာ မင်းဇံကျော်ဆိုတာ ကျွန်တော်မှမဟုတ်တာ။
ဒါပေမယ့်လေ... ကျွန်တော့်ဘ၀ဖြစ်စဉ်က ရထားကြီးစီးလာတာဆိုရင် ဒါဟာ လမ်းဘူတာလေးတစ်ခု
ပေမို့ ခေတ္တခဏတော့ ဖြတ်သန်းခိုဝင်ရမယ်ပေါ့။ ကျွန်တော် ရည်ရွယ်ခုတ်မောင်းလာခဲ့တဲ့ လမ်းဆုံးဘူတာကတော့....။
ဟော...တွေးရင်း မောင်းရင်း ကျွန်တော့်အလုပ်စခန်းလေးကိုတောင် လယ်ကွင်းတွေကြားထဲမှာ လှမ်းမြင်နေရပြီ။ ဟိုကောင်တွေ အလုပ်မှ လုပ်နေကြရဲ့လားမသိဘူး။ ပန်းရန်အဖွဲ့ရဲ့ တစ်နေ့စားစရိတ်နဲ့
လုပ်အားခက နည်းတာမဟုတ်ဘူး။ မခိုမကတ်လုပ်ကြမှ စရိတ်မထောင်းမှာ။
ဘိလပ်မြေအိတ်တွေရော။ ကုန်ရမယ့်အရေအတွက်ထက် ပိုလျော့နေပြီလား။ အခိုးများခံနေရပြီလား မသိဘူး။ ဒီနားတစ်ဝိုက်မှာက လျှိုလေးတွေ ချိုင့်လေးတွေအပေါသား။ တစ်ယောက်တစ်အိတ် ထမ်းသွားပြီး
တစ်နေရာရာမှာ ၀ှက်ထားလိုက်ရင် တော်ရုံရှာမတွေ့နိုင်ဘူး။ နီးစပ်ရာရွာလေးတွေကို တဖြည်းဖြည်းချင်း
ပန်းရန်ဆိုတာက အလုပ်ရှင်ကန်ထရိုက်တာကို ဘယ်လိုဖဲ့ရမလဲလို့ ချောင်းနေကြတဲ့ကောင်တွေ။ တိုက်ဆောက်တုန်းကတောင် အလုပ်သိမ်းအပြန် ထမင်းဘူးထဲ ဘိလပ်မြေတို့ သံချောင်းတို့ ထည့်ခိုးတာ
မိဖူးသေးတယ်။ ဘယ်ကောင်မှ ယုံရတာမဟုတ်ဘူး။ သူခိုးချည်းပဲ။ ဘယ်သူမှမကောင်းဘူး။ အလကားကောင်တွေ။
သူများသာပြောနေတာ။မထူးပါဘူးလေ။ ကျွန်တော်ကရော...။ ကန်ထရိုက်တာဆိုတာကရော...။
တော်ပြီ။ အတွေးလွန်ရင် အကုသိုလ်များတယ်။ ဒီတံတားတစ်စင်းပြီးရင် ရတဲ့အမြတ်နဲ့ ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ သီချင်းလေးတွေ ခွေလုပ်ဖို့စီစဉ်ရမယ်။ နိုင်ငံကျော် သီချင်းရေးဆရာကြီးဖြစ်ရင် ကန်ထရိုက်တာအလုပ် လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ သီချင်းတွေကြားထဲမှာပဲ ပျော်ချင်တယ်။ အုတ်တွေ၊ သဲတွေ၊ ဘိလပ်မြေတွေနဲ့ လောဘဇောတွေ ထွေးလုံးနေရတဲ့ဘ၀ကို မုန်းတယ်။
ဟာ....အတွေးလွန်နေလိုက်တာ...။ နီးလာမှ သေချာကြည့်မိတယ်။ ဘိလပ်မြေအိတ်အထပ်ကြီးက
တော်တော်လျော့နေပါလား။ ဒီနှစ်ရက်နဲ့ ဒီလောက်ကုန်စရာမှ အကြောင်းမရှိတာ။
ကျွန်တော့် စိတ်ကူးယဉ်သီချင်းလေး ကြိုးပြတ်ဂစ်တာနဲ့အတူ မဆလာမွှေအိုးထဲ ထိုးကျသွားတော့တယ်။
မဟေသီမဂ္ဂဇင်း....( စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၀၈)
June Moe 12 December 2011 at 03:24
ဘဝအမောအတွက် အဆင်ပြေသလို ရုန်းကန်ရတဲ့၊ ၀ါသနာနဲ့ ရပ်တည်ချင်တာက တခြား၊ လုပ်ဆောင်နေရတာက တခြားဖြစ်တဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီး...
ဖတ်ပြီး ရင်ထဲတစ်ခုခုကျန်သွားတယ် အမဆရာမရေ
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) 12 December 2011 at 09:26
စိတ်ကူးယဉ်နေတုန်း အဆုံးသတ်မှာ ဖြတ်ခနဲရိုက်ချခံလိုက်ရတယ်.
ကောင်းတယ် အစ်မဝေ. ဖတ်လို့လည်းကောင်း တွေးစရာလည်း ရသွားတယ်
ဝါသနာပါတိုင်း မလုပ်ဖြစ်ဘဲ ဆေးစက်ကျရာမှာ ပျော်နေရတဲ့ ဘဝမျိုး လူတိုင်းနီးပါဘဲထင်ပါတယ်နော်.
တကယ်တမ်းတော့ ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ခွင့်ရတာဟာ ကုသိုလ်ထူးခြင်းတစ်မျိုးပါ
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! 26 December 2011 at 09:12
ဘဝထဲ လက်တွေ့ရှင်သန်ရတဲ့အခါ... စိတ်ကူးမျှော်လင့်တွေက တဖြည်းဖြည်း ဝေးသွားတက်တယ်ဆိုတာတော့..အမှန်ပါပဲ...ေ
Jame Aung 25 January 2012 at 02:15